August 2, 2020 975
सुनको भाउ तोलाको झण्डै एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आज तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेर सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सु’नचाँदी व्यव’सायी महासङ्घले जनाएको छ । यो अहिलेसम्मकै महँगो भाउ हो ।
को रोना स ङ्क्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै ओरालो लागिरहेको बेला सुनको भाउ भने दिनदिनै उकालो लागिरहेको छ ।
भाउ महँगो हुँदै गएपछि विभिन्न बैंकमा लकडाउ’नअघि नै ल्याइएका ३ सय ३० किलो सुन बिक्री हुन नसकेको महासङ्घ अन्तर्गतको भाउ नि’र्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअ’नुसार महासङ्घको सिफा’रिसमा व्यवसायीले बैंकबाट सुन किन्ने गर्छन् । तर भाउ महँगो भएपछि कारोबार ठप्प हुँदा अहिले सुन किनबेच भएको छैन । यस्तै मौज्दात रहेको सुन नै बि’क्री नभएपछि नयाँ मगाउने काम पनि ठप्प नै भएको छ ।
केही वर्ष अघिसम्म तीज नजिकिएसँगै सुनको कारो’बार बढ्ने गरेको भए पनि यसपाली कोरो’नाका कारण मानिसले दैनिक उपभोग्य वस्तुलाई प्राथमिकता दिँदा कारोबार नहुने देखिएको छ । यस्तै आज चाँदी पनि तोलामा ३० रुपैयाँ बढेर तोलाको १२ सय ३० रुपै’याँ पुगेको छ ।
Prevनानीको नाम राख्दै गरियो न्वारन, बच्चाहरूले गीत गाएर रमाइलो गरे (भिडियोसहित)
ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ , यस्तो छ आजको रेट । हेर्नुहोस्
आजबाट ग्यास ११ सय २० रुपैयाँमा र चिनी ६३ रुपैयाँमा पाइने, अरु के-के मा छुट पाइन्छ ? (सूचना सहित)
पल शाह पक्राउ पर्दै, कति वर्ष होला जेल सजाय ? यस्तो छ कानुन
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (81150)